Wepamusoro 14 Best Kudonhedza Ecommerce Mapuratifomu - Kudonhedza kubva pasirese kusvika pasirese
Academy Vhura Zvitoro Sarudza Mapuratifomu
Wepamusoro 14 Akanyanya Kudonhedza Ecommerce Mapuratifomu
Kuti uite bhizimusi rinodonhedza, iwe haufanire kuroja kumberi kwechitoro kuti uratidze uye uchengete zvinhu zvako, asi kazhinji, iwe unoda chikuva chekuvaka chitoro chako chepamhepo, uye kupinza zvigadzirwa kubva kune vanotengesa. Izvi zvinotevera zvinotarisa pamapuratifomu mapfumbamwe, uye netariro zvichakupa ruzivo rwakawanda rwekuti ndeupi angakushandire zvakanyanya.
Shopify ndiyo yepamusoro ti-e-commerce chikuva iyo inokutendera iwe kunyora zvigadzirwa zvishoma zvisinganetsi. Iyo ndiyo inonyanya kufarirwa yerudzi rwayo uye yakashandiswa kugadzira mamirioni anenge asinganyatsoita. Saka kuve chikuva chesarudzo kune vazhinji vanodonha.
Shopify inokupa zvese zvaunoda kuti umise chitoro chako chepamhepo. Iyo inovhara iyo domain domain, kuitisa, yekubhadhara masuo uye zvichingodaro. Chero ani zvake anogona nyore kugadzira chitoro chepamhepo mumaawa mashoma, pasina ruzivo rwemberi rwekuvandudza webhu hunodiwa. Kusvika pakuziva iyo Shopify mushandisi interface iri nyore nyore, asi pachave paine kumwe kuyedzwa uye kukanganisa kune vekutanga nguva vashandisi.
Makambani makuru akadai saPstrong, Evernote uye Wikipedia vese vanoshandisa Shopify kutora zvitoro zvavo. Icho chivimbo chakavimbika, chakavimbika uye chakakosha kusimudzira kubudirira kwako mue-commerce uchiri kukupa iwe uzere kutonga pamusoro pekugadzirwa uye maratidziro enzvimbo.
Kune imwechete chete yakashata iyo Shopify haina mahara. Sisitimu inodhura $ 29 pamwedzi uye Shopify inotorawo 1.5% yemari inobhadharwa kubva pakutengesa kwese. Nekudaro, Shopify inopawo mazuva gumi nemana emahara kuyedzwa kune vashandisi vatsva saka kana iwe ukaona kuti haudi saiti iwe unogona kungorega kuishandisa uye usarasikirwe nechuru.
Kana iwe uri mutsva anodonhedza kana iwe usina webhusaiti kana usingade kudhura zvakanyanya pakuvaka iyo inodonhedza chitoro iwe yaunogona kusarudza WED2C kutanga rako rekudonha bhizimusi mahara.
ne WED2C, unogona kutanga kudonhedza pasi nyore, kungo bata mashoma.
Gadzirisa zvigadzirwa mutengo sezvaunoda
Vagovane navo pasocial platforms kusimudzira
Siya zvese zvinosanganisira kurongedza, kutumira, uye mushure-kutengesa kuitisa ne WED2C apo vatengi vanoisa odha kuburikidza neyako link.
Woocommerce inozivikanwa neWordPress plugin inogonesa varidzi vesaiti kugadzira uye kumhanyisa zvitoro zvepamhepo. Iyo yakavhurika-sosi sisitimu ine akawanda matemplate anowanikwa kubatsira kuti utange iwe kutanga.
Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti kuti ugadzire Woocommerce chitoro unofanirwa kuve neiyo WordPress yakavakirwa webhusaiti kutanga. Uye kunyange iyo plugin pachayo yakasununguka kushandisa, kuitirwa kwewebhu webhusaiti hakusi. Kuvaka chitoro neWoocommerce kunogona kuvhundutsa vashandisi vatsva, sezvo zvichida ruzivo uye ruzivo izvo chete zvine ruzivo vashanduri vewebhu vangave nazvo. Saka kuve sarudzo iri pachena yevakagadzwa vewebhu vanogadzira. Asi kune vanotanga kukwira kunetsa, kana iwe uchinge wajairana nepuratifomu zvinova nyore sezvaunoenda. Kune rimwe divi, panogara paine sarudzo yekuhaya nyanzvi kuti ikubatsire kugadzira chitoro chako kubva pasi kumusoro.
3Dcart ipuratifomu yakavharwa yakanyatsogadzirirwa E-commerce zvinangwa. Chitoro che3Dcart chiri nyore kwazvo kugadzira, nevashandisi vachirumbidza kuti vanonakidzwa sei nekuunganidza kwayo maficha anovandudzwa kazhinji. Iyo interface yakajeka uye yakarongedzwa-yakarongedzwa, 120+ yakavakirwa-mukati peculiarities uye makumi mashanu+ matemplate emahara anowanikwa.
Iyo 3Dcart timu inozvirumbidza kuti haizombobhadharisa chero mari yekomisheni yekutenga papuratifomu yavo. Kutaura kuti vashandisi vanongobhadhara chete mari yekunyorera, makumi maviri emadhora pamwedzi yepakeji yekutanga iri kusvika kune zvigadzirwa zana uye 20 vashanyi pamwedzi. Iyo yepamusoro phukusi inodhura iwe $ 100 pamwedzi.
Kutanga & SCALE BHUSI RAKO NE CJDROPSHIPPING
Magento ndeye yakavhurika-sosi chikuva chakagadzirwa muna 2007 chakagadzirirwa kunyanya kumhanya uye kuvaka online zvitoro. Yakatengwa neBay uye inoonekwa seimwe yeakanakisa mapuratifomu ekugadzira nekutarisira eCommerce zvitoro zveese saizi.
Magento ine yakanaka chengetedzo sisitimu, iri kupfuura SEO yakagadzirira. Parizvino, ine shanduro mbiri; Magento Nharaunda uye Magento Enterprise. Iyo yemunharaunda vhezheni yakasununguka uye inonyanya kunangidzirwa kumabhizinesi madiki. Magento Enterprise inobhadharwa chikuva chakanangana nepakati kusvika kumabhizimusi makuru.
Iyo inopa yakakura maficha senge yunifomu yekumberi-kumagumo interface kune vatengi vako, ichangobva kuwedzerwa zvinhu kuratidza, kuenzanisa sarudzo, mushandisi-inoshamwaridzika yekutenga ngoro, yakangwara zvigadzirwa katalog, uye zvimwe zvakawanda. Chinhu chega chakakanganisika neMagento ndechekuti inomhanya PHP, saka zvinoda hunyanzvi hwekuronga nekushandisa zvinobudirira. Zvese kunyangwe ichipa maficha makuru, zviri nyore kushandisa. Iko hakuna kushomeka kwePHP savvy vagadziri vanoziva neMagento yakagadzirira kuzvimiririra. Uye makambani anoyemurika madiki uye makuru makuru ega Magento ezvitoro, zvichiita sarudzo inoshanda kuti utange bhizinesi rako.
BigCommerce ndeyevanoverengera vanoda kurota uye inofungidzirwa nevakawanda senzvimbo yepamusoro-yakavharwa yezvitoro online. NeBigCommerce, iwe unogona kunakidzwa mune nitty-gritty yezvinhu zvese zvee-Commerce chitoro. Nekudaro, iyo yakaoma mweya inoratidzwa zvakajeka zvekuti haizokanganisa mashandiro ako ezuva nezuva. Nekudaro, iyo inongopa chete manomwe ehunyanzvi madingindira emahara, achienzaniswa ne7 ayo anopihwa kuburikidza neShopify. Haisi yemahara chikuva uye ine akawanda ekutanga-kirasi mubhadharo gedhi rekusanganisa nzira dzinowanikwa. Unogona kusarudza imwe yemapakeji matatu aripo uye ubhadhare mari yemwedzi nemwedzi zvinoenderana. Chinyorwa chepamhepo chepamhepo chepamhepo chinodhura makumi matatu emadhora pamwedzi uye chemberi kupfuura makumi masere emadhora pamwedzi.
SquareSpace ipuratifomu yewebhu yekuvaka mawebhusaiti emarudzi ese, kusanganisira zvitoro zvepamhepo. Kune akawanda anokwezva matemplate ekutanga nawo, uye imwe neimwe inonyanya kugadziriswa. Kugadzira SquareSpace yakavakirwa chitoro zvakati omei pakutanga asi zvakazara zvine chinoshanduka peji mupepeti pamusika nhasi. Yaro browser-based peji mupepeti inokutendera iwe kuti ugadzire yako inoshanda webhusaiti kungave kubva pakutanga kana kubva kune imwe yayo inopa mubairo-anokunda matemplate. Kune akatiwandei ekunyorera aunosarudza kubva, aine mabhizinesi mapakeji anotangira pamadhora 18- $ 40 madhora pamwedzi. Iine yepamusoro tier inozvirumbidza zero komisheni fizi, risingagumi bandwidth / yekuchengetera nzvimbo yekugamuchira ese ako zvigadzirwa zvigadzirwa.
Volusion ipuratifomu inozivikanwa yakavharwa inoitirwa chaizvo E-commerce. Iyi chikuva inopa ese-mu-one maficha ayo anodikanwa ekumhanyisa yakabudirira online chitoro. Izvo zviri nyore kushandisa uye zviri nyore kuita shanduko kune zvigadzirwa. Chitoro cheVolusion chakavakirwa chinogona kushandiswa padhuze neiyo iripo WordPress webhusaiti. Iko kune kukanganisa kuti mutengo wayo unodhura zvishoma. Unofanirwa kushandisa 29 $ kusvika 299 $ pamwedzi kuvhura chitoro pairi uye unodawo kubhadhara SSL yekuwedzera kuchengetedzwa. Uyezve, hapana chimiro che posvo sarudzo paunenge uchigadzira webhusaiti yako.
Wix ipuratifomu inozivikanwa yakavharwa yekugadzira ese marudzi emawebhusaiti, zvitoro zvepamhepo pakati peimwe yadzo. Iwe haugone kushandurudza zvakasununguka pachikuva pachacho kana maturusi. Kuvaka Wix yakavakirwa online chitoro zviri nyore, chero munhu anofarira kudzidza akasiyana maficha anogona kuishandisa. Wix inopa sarudzo pakati pevakawanda vakagadzirira matemplate uye akati wandei mapakeji akasiyana akasiyana ekubatira uye traffic miganhu. Wix inopa e-commerce nezvirongwa zvakabhadharwa uye nekudaro iyo yemahara vhezheni yeWix haizove sarudzo inoshanda. Paunenge uchishandisa Wix wakavharirwa kune maviri akasiyana ekubhadhara magedhi; Paypal uye Authorize.net. Iyo yakakosha yeWix Ecommerce package inodhura chete $ 9 pamwedzi uye iyo VIP package inokumhanyisa iwe 26 $ pamwedzi.
Nyaya hombe neWix ndeyekukurumidza kumhanya. Yadzo kodhi inotakudza boka rezvinyorwa (js) pakutanga, iyo inodzora kudzora nguva. Uye kuisa isiri-Wix API kana plugin inogona kuve yakaoma kupfuura zvayaifanira kunge iri.
Shoplazza i "software sebasa" (SaaS) kuyambuka muganho e-commerce saiti-yekuvaka ecosystem kubva kuChina; ivo vanopa kuyambuka-muganho eCommerce marangi neE ERP masevhisi uye vanowedzera mari yavo kuburikidza neFB / Google kushambadzira kushambadzira uye yakawanda yezvinhu zvekushambadzira.
CJ ichangobva kuvhurwa kuShoplazza chikuva, saka vatengesi vanobva kuShoplazza vanogona kubatanidza zvitoro zvavo uye titendere kuzadzisa maodha ako otomatiki.
Squarespace chivakwa cheAmerican webhusaiti uye inochengeta kambani. Iyo inopa software sevhisi yekuvaka webhusaiti uye kubata, uye inobvumira vashandisi kushandisa pre-akavaka webhusaiti matemplate uye kudhonza-uye-kudonhedza zvinhu kugadzira uye kugadzirisa mapeji ewebhu.
Kune anodonhedza, iwe unogona kugadzira yako yepamhepo chitoro uye kubatana neCJdropshipping yezvigadzirwa zvinyorwa uye kurongeka kuzadzikiswa.
CJ ichangobva kuvhurwa kune squarespace chikuva, saka vanodonhedza kubva kuScarespace vanogona kusanganisa zvitoro zvavo uye kunakirwa nemasevhisi eCJ izvozvi.
eBay ndeimwe yekare uye yakabudirira eCommerce mawebhusaiti paInternet, asi haitenge chero zvinhu zvacho. Panzvimbo iyoyo, inobvumidza vashandisi kunyora zvinhu zvekutengesa, izvo vamwe vashandisi vanogona kuzobheja mumisheni.
Vashandisi ve eBay vanogona kubatanidza chitoro chavo neCJ uye zvigadzirwa zvigadzirwa. Nebasa rekutenga rakakura reCJ, zvichave zviri nyore kuwana vatengesi paCJ uye kutumira maodha. Zvakare CJ ikozvino iri kushanda mukuvandudza masevhisi eBay chikuva, yakaratidza mabasa senge "yekutarisisa mamiriro ehukama" ichave ichiwanikwa munguva pfupi.
Etsy iri pamusika pamusika inotarisa pazvinhu zvakagadzirwa nemaoko kana zvevintage. Iyo inonyanya kusanganisirwa nematoyi akagadzirwa nemaoko, akaunganidzwa, hunyanzvi, zvinhu zvemumba, fenicha yemazambiringa, zvishongo, zvipfeko, uye zvinhu zvehoridhe, kuwedzera kune hunyanzvi uye zvigadzirwa zvehunyanzvi.
CJ ichangobva kuvhurwa Etsy chikuva, saka vatengesi vanobva kuEtsy vanokwanisa kubatanidza zvitoro zvavo uye vanakirwe nemasevhisi eCJ senge yekudhinda-pane-inoda chinhu ikozvino.
Shopee yakatanga kuvhurwa muSingapore mu2015, uye kubvira ipapo yakazvikurisa uye ikave inotungamira e-commerce chikuva muSoutheast Asia. Iyo ine yakasarudzika sarudzo yezvikamu zvezvigadzirwa kubvira kubva kumutengi zvemagetsi kuenda kumba & kurarama, hutano & runako, mwana & matoyi, fashoni uye kugwinya michina.
Lazada ndiyo inotungamira eCommerce chikuva muSoutheast Asia, zvinobudirira Amazon yedunhu. Vatengesi vanobva pasirese vanogona kushandisa iyi portal kushambadzira zvigadzirwa zvavo muIndonesia, Singapore, Vietnam, Philippines, Thailand, uye Malaysia.
Mukupedzisa, kune akawanda akasarudzika e-commerce mapuratifomu aunogona kusarudza kubva. Uye zvinogara zvakanaka kuva nesarudzo. Chikamu chega chega chinopa maficha anodiwa kuvaka hombe online chitoro. Nekudaro, yega yega inezvayo zvakasarudzika zvinokanganisa kutengesa kwako mukufamba kwenguva. Zvingave zvine hungwaru kunyora runyorwa rwezvinodiwa iwe zvaunoda kana uchisarudza imba kune rako ramangwana bhizinesi, wobva waenzanisa izvo kune echikamu chinyorwa cheplatform imwe neimwe. Nekudaro, kana iwe uchingoda kutanga nekukurumidza sezvazvinogona, kubheja kwakachengeteka kungave kutanga Shopify account.
Tags akanakisa kudonhedza makambani, akanakisa kudonhedza mapuratifomu, yakanakisa kudonhedza vatengesi, cj kudonhedza, cjdropship, cjdropshipping, dropshipping, kudonhedza vamiririri, kudonhedza mapuratifomu, maitiro ekudonhedza pasi, maitiro ekuwana anodonhedza anotengesa, maitiro ekuwana mutengesi wekudonhedza, maitiro ekuita mari pamhepo 2021, kutanga sei kudonhedza bhizinesi, kutanga sei kudonhedza, kuita mari paIndaneti, makemoneyonline, shopu kudonhedza, wix, woocommerce
← Chii Chaunotarisa muPrinda paDhiand Kambani → Maitiro Ekunyora Iyo Brand Chirongwa Kune Yako Kudonhedza Chitoro?